LegitVPN.com - enzanisa akanakisa evakanakisa VPN vapi
Akanakisa maVPN eChina
Akanakisa maVPN eChannel
Akanakisa maVPN eTorrent
Iyo Yakanakisa yeVakanakisa VPN's
Kugamuchirwa kuLegitVPN.com - isu tiri pano kuzokutungamira kuti usarudze yakanyanya VPN pane zvaunoda.
Isu tinongo ongorora VPN vanopa izvo zvakachengeteka uye nekukurumidza kushandisa izvo zvaratidza kuvimbika kwavo.
Enzanisa vakanakisa VPN vanopa
Vakanakisa uye vane kodzero kwazvo VPN vanopa gore ra2020
Verenga zvese wongororo
Inoenderana neNetflix, BBC & Disney + Hulu
Inopfuura makumi mashanu nemashanu nyika
Shanyira NordVPN saiti
Shanyira ExpressVPN saiti
Yakachipa kwazvo VPN kunze uko
Shanyira Surfshark VPN saiti
Shanyira CyberGhostVPN saiti
Pamusoro pemaseva 2000
Shanyira PureVPN saiti
Zivhura Geo-zvinorambidzwa zviri nyore nekumhanyisa-inoenderana maVPN. Isu tinogadzira chinyorwa chiri nyore kuti chikufambise iwe kuburikidza.
Chrome ndiyo inonyanya kushandiswa mubhurawuza pasirese. Izvo zvakakosha chaizvo kuchengetedza yako cybersecurity uye kusazivikanwa nemidziyo yeVPN.
Wese internet mushandisi anofanira kungwarira neTorrents uye peer-to-peer softwares. Isu tinokurudzira kushandisa VPN kune zvakavanzika.
China yakaoma kwazvo nemitemo mune izvo zvinouya mukuzeya pasi rese webhu. Kune vashanyi zvinogona kutsamwisa chaizvo.
Chii chinonzi VPN?
VPN inozivikanwawo sepachivande netiweki network chinhu chaungangodaro wakanzwa nezvacho. VPN isoftware inochengetedza kubatana pakati peanogamuchira uye anotumira. Inoita yako yeruzhinji traffic kuenda isingazivikanwe. Vanhu vazhinji vanoshandisa iyo yekuwedzera zvakavanzika uye kusazivikanwa asi kazhinji iri kushandiswa kupfuudza geoblocks iyo inogona kunge yakagadzwa neGoverments.
Zvakare mazhinji masevhisi ekushambadzira anoburitsa mafirimu matsva uye akateedzana muUSA semuenzaniso vasati vapera munyika yako.
Ne VPN unogona kuwana iyo USA yakashandira zvirimo, nekuti webserver inofunga kuti uri muUS.
Chii chandinofanira kuita kana ndichisarudza chaiyo vpn-sevhisi?
Kune mazana eVPNs kunze uko asi isu tinongofananidza iwo epamusoro. Vazhinji vavo vanopa zvipikirwa zvekunyepa zvavasingakwanise kununura, isu tinongotsigira maVPNs anga aripo kwenguva yakareba uye anozivikanwa mune yekuchengetedza indasitiri. Muna 2017 kutsvagurudza kwakawanda kwakaratidza kuti kune vanhu vazhinji vanoshandisa zvisina kunaka maVPN eVPN akasununguka kuwana mukana usingabvumidzwe kune vakashungurudzwa system.
Iko hakuna mvumo yemahara vpns, chete emahara miedzo uye iwo anogona kuwanikwa pamusoro peji rino.
Nzira yekuziva sei ndeye VPN mvumo?
Iwe haufanire kunetseka nezve izvo. Isu takatoyedza yakachengeteka zvikuru yeVPN yekubatanidza iyo inomhanya nemakambani chaiwo akavimbika kutenderera pasirese.
VPN inononoka network kumhanya here?
Mune zvimwe zviitiko izvi zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Isu takaedza mazana akasiyana evanopa VPN kupa kuti tione inogona kuendesa mashandiro akanaka pasina kurasikirwa kwakakosha zvivakwa. Isu takatombovaedza pamitambo uye nerukova kuti tione kana zvirizvo zvavanotaura.
Ko VPN internet surfing yakachengeteka here?
Ndizvozvo. Paunenge uchishandisa VPN hauna kunyatso kuzivikanwa uye wakachengeteka. Hapana anoziva zvaunoita, iwe ndiwe ani uye uripi.
VPN inobvisa mavairasi nema troijans here?
Zvinosuruvarisa kwete. VPNs dzinowanzozivikanwa se antivirus asi hadzisi. Ivo chete vanochengetedza hukama hwako muwebhu hwepasi rose. Ivo havakwanise kukudzivirira kubva kumafaira aunotora kana mapeji aunoshanyira.
Ini ndinofanira kuvhara VPN kana ini ndisingashandise?
Kwete iwe haufanire kudaro. Vanhu vazhinji vanozvichengeta nguva dzose kuti vawedzere zvakavanzika. Kana zvasvika kumafoni uye nhare mbozha zvinogona kunge zvichidya bhatiri.
Mashandisiro ekushandisa VPN sevhisi?
Kushandisa VPN kuri nyore uye nekukurumidza, kunotanga nematanho ari nyore.
Tsvaga VPN yakakodzera yezvaunoda. Isu tinokubatsira iwe nechikamu ichi saka haufanire kutora nguva yekutsvagisa wega, sezvatakatoyedza vese vanopa VPN.
Paunenge iwe watenga iyo VPN iwe waida iwe kuti utore magwaro ako. Uine izvi zvitupa pinda kune yako VPN vape webhusaiti uye isa iyo application kune izvo zvishandiso zvaunoda. Inogona kuve laptop, mbozhanhare kana desktop. Unogona kuzviwana mune ese iwo.
Iye zvino waisa software inguva yekuimisikidza uye kubatanidza kune nzvimbo yaunosarudza.
VPN inoshanda sei?
Ona kuti zviri nyore sei kuisa uye kushandisa. Chikamu chinonyengera chete ndiko kutsvaga iyo yakakodzera kwazvo VPN yenyaya yako.
Cybersecurity nhau uye zvigamba
Cisco & Firepower kunetsekana 23.7.2020
Wese munhu anoshandisa Cisco uye Firepower vanofanirwa kugadzirisa vatyairi vavo nekukasira. Kunetseka kwakakomba kwawanikwa.
Ndivanaani isu tiri kuLegitVPN.com
Isu tiri boka revanhu vanga vari muindasitiri yekuchengetedza cyber kwemakumi emakore. Isu tinofarira kuchengetedza zvakavanzika zvepamhepo uye zvemunhu data. Ndicho chinhu icho mumwe nemumwe wedu anofanirwa kuchengeta intrest mukati. VPNs ndiyo nzira yakanakisa uye yakapusa yekuzvidzivirira iwe pachako kunetseka kwemakomputa nekukurumidza. Isu tinoziva kuti panogona kuve neakasiyana kwazvo maVPN vanopa mamwe acho kungoitirwa zvisiri pamutemo. Ndokusaka isu tiri pano kuti tikutungamirire iwe uwane yakachengeteka uye yakachengeteka VPN.
VPN inogona zvakare kushandiswa kuwana geoblocked zvemukati senge kutarisa dzimwe nyika hova uye tv-chiteshi.
Iwe unogona zvakare kurodha pasi data kubva internet uchichengetedza yako isingazivikanwe uye yakachengeteka kubatana
Kuchengetedzwa kweInternet chinhu icho isu tese chatinofanira kutarisira. Mhosva dzepamhepo dzave kungogara dzichikwira uye kurwisa kwakawanda kuri kuwedzera zuva rega rega.
Chaicho chaicho kurwisa ndeyeDdos (kusabvumidzwa kuramba kwebasa) iyo inoputsa kubatana kwako kana kukanganisa kwekare dhata uko data rako pachako rinogona kudonhedza kumaoko akashata.
Kuti uve nechokwadi chekuti wakachengeteka unofanirwa kushandisa VPN vanopa izvo zvakachengeteka, zvinokurumidza uye zvakachengeteka.
Isu tiri boka revanhu vanofarira kuchengetedza kwedu nevamwe vedu zvakavanzika. Nzira yakanakisa yekuita izvozvo kuwana chaiyo VPN. Nekuyedza nekuenzanisa vakasiyana veVPN vanopa isu tinogona kubatsira vatengi kuita zvirinani sarudzo.
CyberGhost VPN Ongororo
Akanakisa maVPN e
Cisco Asa uye Firepower kunetsekana
2020 LegitVPN.com - akanakisa eakanakisa maVPN